ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာလဲ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအကြောင်းသင်အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ဖူးသည်မှာသေချာသည်။ ဒါပေမယ့် ဝေါဟာရကိုယ်နှိုက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ သူတို့ပြောသလိုပဲအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုရင်သင်တကယ်သိသလား။
အဖြစ်မှန်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အလွန်အကျွံကြောင့်ရာသီဥတုကိုရေရှည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံး၏ပူနွေးလာမှု။ သဘာဝအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များကလူတို့သည်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဟုခေါ်သောကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ သောကြောင့်, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာလဲ
3 Anthropogenic အကြောင်းတရားများ
မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးရှုပ်ထွေးသောသုတေသနနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရာသီဥတုငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဤရွေ့ကား၊ အချိန်ကာလကုန်လွန်ခြင်းနှင့်ပင်ကုန်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဤအမှုကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်သည်။ ပါဝင်သောအချက်များစွာရှိသည် - အမြင့်၊ အီကွေတာနှင့်အကွာအဝေး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း' အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည် ရေရှည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်းတွင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု။ ဒီဝေါဟာရကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုကစတင်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကသဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
ထိုကျွမ်းကျင်သူများသည်အဓိကအစိုးရအများစု၏အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် လိုက်နာရမည် သူတို့အဖျက်သက်ရောက်မှုများထပ်မံသွားချင်ကြဘူးလျှင်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်သည် သဘာဝက o မနုropဗေဒဆိုလိုသည်မှာလူသား၏လုပ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဓိကသဘာ ၀ အကြောင်းတရားများတွင်အောက်ပါတို့ကိုတွေ့ရှိရသည်။
၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အဓိကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဥပမာ, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၅ သန်းခန့်ကကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်လုံးသည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး Ice Age ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးနောက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောအနည်းငယ်သောဒိုင်နိုဆောများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီအချိန်များကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂,၈၀၀ ကမက္ကဆီကိုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဥက္ကာခဲတစ်ခုသည်လည်းအလားတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုလက်ခံခဲ့သည်။
လူသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်ဟုပြောဆိုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ el Homo Sapiens သစ်တောပြုန်းတီးမှုစတင်ပါလိမ့်မယ် သူတို့ကိုလယ်ယာမြေသို့ပြောင်းလဲရန်။ အမှန်မှာ (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ခန့်) ကလူသားမျိုးနွယ်သည် ၅ သန်းထက်မပိုခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အရေးကြီးသောကိန်းဂဏန်းဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာမြေအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်ယနေ့ထက်များစွာနည်းသွားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူပေါင်း ၇ ဘီလီယံသို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်းကဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (သို့) မီသိန်းကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုတိုးများလာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေမှုသည်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဘာပါ ၀ င်တာလဲ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းပြောသောအခါရည်ညွှန်းသည် လေထုထဲတွင်နေ၏အပူကိုထိန်းသိမ်း ၎င်းတွင်တွေ့ရသောဓာတ်ငွေ့အလွှာ (ဥပမာ CO2၊ မီသိန်း၊ နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ်) ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အလွန်အေးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သဘာဝသည်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုဟန်ချက်ညီစေရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုခက်ခဲစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်မှ စ၍ ထုတ်လွှတ်မှု ၃၀% တိုးတက်ခဲ့သည်.
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာအစိုးရများအဖွဲ့ (IPCC) ၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာများအရရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ခံစားနေရပြီဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစုတွင်အပူချိန်0,6ºCမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည် ၁၀ မှ ၁၂ စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းချက်များအားလုံးသည်အလားအလာမရှိပါ - ၂၁ ရာစုတစ်လျှောက်တွင် ၀.၄ နှင့် ၄ ဒီဂရီအကြားအပူချိန်နှင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ၂၅ မှ ၈၂ စင်တီမီတာအကြားမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ကျနော်တို့အပူချိန်မြင့်တက်သွားကြသည်ကိုငါတို့သိပေမယ့် ငါတို့ဘာရင်ဆိုင်ရမလဲ။ သာယာသောရာသီဥတုရှိခြင်းသည်လူများစွာအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးကိုထာဝရပြောင်းလဲစေနိုင်သောအကျိုးဆက်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
သေဆုံးခြင်း၊ ရောဂါများ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ တိုတိုပြောရရင်အပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောအရာများတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရောဂါအသစ်များပေါ်ထွက်လာပြီးအပူပိုင်းဒေသများ၌သာမန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်သောရောဂါများပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းလတ္တီတွဒ်ဆီသို့ ဦး တည်တိုးပါလိမ့်မယ်.
အပင်နှင့်သတ္တဝါများကိုလည်းထိခိုက်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောပန်းပွင့်သို့မဟုတ်ဥတင်သောအဖြစ်နွေ ဦး ရာသီဖြစ်ရပ်များအစောပိုင်းလာလိမ့်မည်။ အချို့သောမျိုးစိတ်များသည်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပြီးအခြားသူများကမူ၎င်းတို့ရှင်သန်လိုပါက ဆက်လက်၍ အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရလိမ့်မည်။
CO2 ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သမုဒ္ဒရာသည်ဤဓာတ်ငွေ့များကိုပိုမိုစုပ်ယူလိမ့်မည် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသန္တာသို့မဟုတ် mussels စသည့်တိရိစ္ဆာန်များစွာသေကျေပျက်စီးလိမ့်မည်။ မြင့်မားသောလတ္တီတွဒ်များတွင်ရေညှိနှင့်ကုန်းတန်း၏ပမာဏပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
နိမ့်ကျသောကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများ နစ်မြုပ်လိမ့်မည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်မှုကြောင့်၊ နှင့်များစွာသောဒေသများတွင်ရေကြီးမှုများသည်သူတို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အရေးအပါဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မိုးခေါင်ခြင်းကပိုမိုပြင်းထန်လာမည် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးသောဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာလဲ
Alejandra Valois Almazan ဟုသူကပြောသည်
Alejandra Valois Almazan အားပြန်ပြောပါ
- တတ်နိုင်သမျှပြန်သုံးပါ၊ သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသမှထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူပါ (နေ့တိုင်းစျေးဝယ်စင်တာကြီးများကိုအခြားနိုင်ငံများမှတင်ဆောင်လာသည့်ထုတ်ကုန်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်လေယာဉ်များနှင့် / သို့မဟုတ်လေယာဉ်များတွင်လေထုညစ်ညမ်းစေသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်သည်)
MJ Norambuena ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီဆောင်းပါးကတော်တော်လေးအသုံး ၀ င်ပေမယ့်မင်းရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဘာလဲ။ ငါမင်းပြောတာကိုသံသယမဝင်ပါဘူး။ သိပ္ပံပညာလောကမှာသိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေကထောက်ခံတာကပိုကောင်းတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အမှန်တကယ်သိသော (သိပ္ပံပညာရှင်များ) အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုသူပိုမိုများပြားလာရန်ကူညီခြင်းနှင့်သူတို့ကြားဖူးသည့်သို့မဟုတ်ဖတ်ရှုသည့်အရာများနှင့်အတူမနေပါနှင့် (အများအားဖြင့်အခြေအမြစ်မရှိသောထင်မြင်ချက်များဖြစ်နိုင်သည်) ။
MJ Norambuena အားစာပြန်ပါ
အဆိုပါ Humboldt ကလက်ရှိ